putty [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/c/cea33680ee8c3b2d69a363416a28fcb8.xhtml failed
Putty dia programme kely afaka atao client SSH na Telnet na RLogin. Izany hoe tsy maintsy misy serveur miodina hiresahana izany vao mety. Ny Putty dia miodina amin’ny milina Windows ary afaka miresaka amin’ny karazana systeme maro toy ny UNIX, Linux, MacOSX,...
Raha ny protocole SSH no jerena dia mahazaka ny protocole SSH-1 sy ny SSH-2 ny Putty, izany hoe ny ankabeazan’ny serveur SSH rehetra ireny izany.
Alaina ny Putty.exe , jereo ny rohy ofisialy eo ambany. Apetraka any amin’izay toerana tiana hametrahana azy.
Alefa ilay Putty.exe (double-click)
Fenoina ny laharana IP na anaran’ilay serveur tiana hidirana eo amin’ilay hoe Host Name (or IP address)
Safidiana ny ampiasaina Raw na Telnet na RLogin na SSH. SSH no apetany raha tsy mana-tsafidy. Ny port dia efa apetany eo ihany koa fa raha mampiasa port hafa dia mila apetraka izany.
Afaka omena anarana eo amin’ilay hoe Saved Sessions ny fidirana amin’ny serveur iray mba tsy hamerenana izany indray raha toa ka mbola hiditra amin’ny manaraka. Apetraka ny anarana dia tsindriana ny Save avy eo. Tokony hahazo toy izao :
Safidiana ny session tiana sokafana dia tsindriana ny Load/Open na omena ny double click ilay izy dia tonga dia misokatra. Mangataka ny Login sy ny Mot de Passe izy dia ampidirina fotsiny. Tokony hahazo toy izao indray :
Betsaka ny configuration azo atao amin’ny Putty fa ny fomba haingana sy tsotra indrindra ireo natoro ireo. Azo atao ny mampiasa Port Forwarding, mampiasa authentification cle publique/privee sns fa ho atao miandalana eo ny fanaovana azy.
Rohy ofisialy hakana azy : Putty
SSH, OpenSSH, VNC, Host
putty.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43